१ डलरमै हवाई यात्रा ! - Aarthiknews
१ डलरमै हवाई यात्रा !
मेक्सिको । एक विमान कम्पनीले विभिन्न मुलुकबाट पलायन भएका आप्रवासीलाई घरफिर्तीको लागि एक डलरमा हवाई यात्राको अवसर प्रदान गर्ने भएको छ ।
मेक्सिकोको भोलारिस नाम गरेको विमान कम्पनीले मध्ये अमेरिकी आप्रवासीलाई घर फर्कन एक अमेरिकी डलरमै हवाई यात्राको अवसर घोषणा गरेको हो । कम्पनीले एक विज्ञिप्ति जारी गर्दै प्रबर्द्धनात्म योजना बमोजिम १ डलरमा हवाई यात्राको अफर अर्थात् यो सेवा उपलब्ध गराएको जनाएको छ ।
स्वेच्छिक रुपमा घर फर्कन चाहने आप्रवासीलाई यो सुविधा उपलब्ध हुने कम्पनीले जनाएको छ । यो योजना सीमित अवधिका लागि तोकिएको कम्पनीले जनाएको छ । स्वदेश फिर्ती हुन चाहाने आप्रवासीहरुले जुन ३० तारिखसम्म १ डलरमा हवाई यात्राको अवसर प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।
यो सुविधा लिन चाहने आप्रवासीले मेक्सिकोका तिजुआना, सिउड्याड जुआरेज, गुइडालाजारा र मेक्सिको सिटी विमानस्थलमा सम्पर्क गर्नुपर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । यो सेवा कोस्टारिका, एल साल्भाडोर र ग्वाटेमालाका नागरिकका लागि उपलब्ध हुने जनाइएको छ ।
सन् २०१८ को अन्त्यसम्ममा हजारौं मध्य अमेरिकी नागरिक अमेरिका प्रवेशका लागि मेक्सिकोमा आप्रवासीका रुपमा रहेका छन् । उनीहरु आफ्नो मुलुकमा जारी हिंसा र गरिबीका कारण पलायन भएको बताइएको छ । यो समाचार अन्तर्राष्ट्रिय समाचार एजेन्सी सिन्ह्वाबाट लिइएको हो ।